विवाह गर्नु र अविवाहित हुनुको फाइदा यस्तो – Everest Pati
विवाह गर्नु र अविवाहित हुनुको फाइदा यस्तो
काठमाडौ। जीवन विताउनका लागि श्रीमान् वा श्रीमती नै चाहिन्छ त ? दाम्पत्य जीवन विताउनै पर्छ ? यसमा एउटा ठूलो जमातले सहमतिको टाउको हल्लाउन सक्छन् । तर, एउटा जमात यस्ता पनि छन्, जो दाम्पत्यलाई बन्धन ठान्छन् र त्यसबाट उन्मुक्त जीवन विताउन राजी हुन्छन् ।
विवाह गर्नैपर्छ त ? हुन त विवाह हाम्रो परम्परा हो । संस्कृति हो । प्रकृतिले पनि दुई विपरित लिंगीको समायोजनलाई स्विकारेको छ । सृष्टि निरन्तरताको लागि पुरुष र महिलावीच संसर्ग हुनैपर्छ । उनीहरु शारीरिक रुपमा एक हुनैपर्छ । प्रकृतिको यो नियमले पनि पुरुष र महिलालाई अलग-अलग राख्दैन । उनीहरुको दुई ज्यानलाई एकाकार गराउँछ ।
त्यसो भए विवाह गर्नैपर्छ त ? यसमा मत विभाजित छ । विवाह गर्नैपर्छ भन्ने केही छैन । हाम्रै ऋषिमुनीहरुले व्रम्हचार्यको महत्वमाथि पनि मन्थन गरेको छ । दाम्पत्य जीवन मात्र होइन कामवासना र यौनबाट समेत मुक्त भएर पालना गर्ने आचार संहिता हो यो ।
विवाह बन्धन कि बाध्यता ? हुन त विवाहलाई हामी ‘वन्धन’ पनि भन्छौं । अर्थात ‘विवाह-वन्धन’ । उन्मुक्त जीवन विताउन चाहनेहरुका लागि यस्तो वन्धन स्विकार्य हुँदैन । उनीहरु विवाह गर्ने, पति वा पत्नीसँग आफुलाई समायोजन गर्ने, बालबच्चा जन्माउने, हुर्काउने, घर व्यवहार चलाउने कुरालाई झन्झट ठान्छन् । र, अनावश्यक पनि । जीवनलाई मस्त भोग गर्नका लागि उनीहरु विवाह नगरी बस्न रुचाउँछन् ।
गृहस्थी सुखको कुरा तर, अर्काथरी जो विवाहलाई प्राकृतिक रीत ठान्छन् । उनीहरु यसलाई जीवनकै एक अंश ठान्छन् । एक्लो जीवन निरास र वेसाहारा हुने उनीहरुको बुझाई हुन्छ । त्यही कारण माटोको भर ढुंगालाई, ढुंगाको भर माटोलाई भनेजस्तै जीवनको सुखदुखमा साथ र सहयोग आदनप्रदान गर्दै बाच्नका लागि विवाहलाई अपरिहार्य मान्छन् । उनीहरु गृहस्थी जीवनमै सुख खोज्छन् ।
के छ विवाह गर्नुको फाइदा ? – दाम्पत्य सुख – वैधानिक यौनभोग – आफ्नो बालबच्चा – सुख-दुखमा साथ– वंश निरन्तरता
अविवाहित हुनुको फाइदा – आफ्नो मर्जी अनुसार जीवन जिउन सकिने – पारिवारिक बन्धन, झन्झट लिन नपर्ने – सन्तानप्रतिको चिन्ता नहुने – आर्थिक व्यायभार कम हुने – अर्काको दुख, बोझ बोक्न नपर्ने – पारिवारिक जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व वहन गर्न नपर्ने
कोरानाको डरले दशैँ तिहारमा जस्तै काठमाण्डौ छोडेर आफ्नै गाउँ फर्किन थाले सर्वसाधारण !